Umkhandlu usolwa ngokuxhaphaza imali | IOL Isolezwe
Umkhandlu usolwa ngokuxhaphaza imali
Isolezwe / 20 July 2012, 12:11pm / BONISWA MOHALE noMLUNGISI GUMEDE
UZanele Magwaza Msibi.
BONISWA MOHALE noMLUNGISI GUMEDE
SEKUQUBUKE izikhalo emphakathini wasoLundi ngesenzo somkhandlu waseZululand oholwa nguNkk Zanele kaMagwaza-Msibi, osolwa ngokusebenzisa imali yabakhokhintela ebekelwe ukuletha intuthuko kodwa ekhokhela izindleko zamabhanoyi andiza engagcwele.
Amalungu omphakathi angathandanga ukudalulwa aveze ukuthi uma amabhanoyi engagcwele, ngumkhandlu waseZululand okhokhela lezo zihlalo.
Athe okubi wukuthi kuthathwa imali yentuthuko ifakwe kula mabhanoyi ekubeni ugesi unqanyulwa mihla namalanga kule ndawo.
Lo mkhandlu usanda kusayina isivumelwano sokusebenzisana nohulumeni wesifundazwe mayelana nokuvuselelwa kwesikhumulo sezindiza sasoLundi nesaseMgungundlovu i-Oribi.
Lama bhanoyi ahamba kabili ngosuku ekuseni nantambama.
Ngesikhathi ethulwa ukugibela kwakungu-R 980 kanti ibhanoyi lihlala abantu abangu-10 kuya kwabangu-50 kuthiwa kuya ngokuthi bangakanani abantu ababhukhile.
UMnuz Sbu Nkwanyana ohola ikhokhasi ye-IFP kuMasipala waseZululand, uthe lolu daba luyabakhathaza ngoba yize babetsheliwe ukuthi umkhandlu kukhona lapho uzolekelela khona abamabhanoyi kodwa abazitholi izitatimende ezishoyo ukuthi kusetshenziswa malini.
UNkwanyana ukhale nangendlela okuphethwe ngayo imali kulo mkhandlu wadalula nokuthi kuyimanje kukhona imali engu-R6.4million okuthiwa ngeyama deveations esetshenziswa yiMeya nemenenja kaMasipala ezinhlelweni ezithandwa yibona.
“Akuhambi kahle esimeni sezimali emkhandlwini waseZululand. Ngesikhathi kuqala lolu hlelo lwamabhanoyi sacelwa ukuba nathi sihambe ngalo sishiye izimoto zethu uma siya eThekwini kodwa akekho ositshelayo ukuthi yimalini efakwayo ukuwaxhasa uma engagcwele,” kusho uNkwanyana.
Ube esenxusa uNgqongqoshe wezokuBusa ngokuBambisana nezoMdabu uNksz Nomusa Dube ukuba aphenye ngesimo sezimali kulo mkhandlu ngoba kuningi okonakele.
UNkk Magwaza-Msibi uvumile ukuthi basebenzisa imali yabakhokhintela ukukhokhela amabhanoyi angagcwele uma endiza.
“Lesi sinqumo kasithathwanga yimi ngedwa kodwa sathathwa yisigungu sonke esilawula umkhandlu ukuthi kumele sizikhokhele izindleko uma amabhanoyi engagcwele,” usho kanje.
UNkk Magwaza-Msibi uthe ikhona imali ebekelwe ukukhokha lezi zindleko kodwa wanqaba ukudalula isamba sayo entathelini.
“Savumelana ngokuthi sizozikhokha izindleko uma kunesidingo izinyanga eziyisithupha kuphela, hhayi ukuthi sekuyohlale kuyinto yemihla ngemihla,” usho kanje.
Uthe basebenzise imali eningi kakhulu bevuselela lesi sikhumulo zezindiza angeke bavume ukuthi zingasetshenziswa.
Ngesikhathi Isolezwe lithinta uMnuz Johan de Klerk oyiMenenja kaMasipala waseZululand uye wacelwa ukuba afonelwe namhlanje ngoba ethe ubephuthuma emhlanganweni.